30 daqiiqo kadib markii ay dhashay ayay imtixaan u fariisatay | Saxil News Network
30 daqiiqo kadib markii ay dhashay ayay imtixaan u fariisatay
Lahaanshaha sawirkaIMAGE COPYRIGHTILU ABBA BOR ZONE COMMUNICATION OFF
Image captionAlmaz Derese
Dalka Itoobiya haweeneey ayaa imtixaan u fariisatay 30 daqiiqa uun ka dib markii ay dhashay.
Almaz Derese, waa 21 sano jir ka soo jeedda magaalada Metu ee galbeedka Itoobiya, waxa ayna ku hanweynayd inay imtixaanka u fariisato ka hor inta uusan canuugeeda dhalan balse imtixaanka dugsiga sare ee Itoobiya ayaa bishii Ramadaan dib loo dhigay.
Maalintii isniinta ahayd ayay foosha qabatay ka hor inta uusan si rasmi ah imtixaanka u bilaaban.
Ms Derese ayaa sheegtay in aysan waxbarashada dhib ku hayn intii ay uurka lahayd, waxayna sheegtay in aysan doonayn in sannadka dambe ay qalin jabiso taasi ayaana kaliftay in ay haatan imtixaanka u fariisato iyada oo markaasi dhashay.
Gabdho uu iskaga aaday arooskoodii iyo imtixaankii jaamacadda
Iran oo joojisay imtixaan dumarka ka eexanaya
Singapore oo fashilisay qalab casri ah oo imtixaanaadka lagu qisho
Isniintii shalay ahayd ayay gashay 3 maaddo oo kala ah Ingiriis, Amharic iyo xisaab balse maadooyinka kale ee u haray ayay u xaadiri doontaa goobaha imtixaanka lagu sameeynayo.
“Sababtoo ah waxaa aan u deg-degayay in aan u fariisto imtixaanka, marka fooshaba kumaaan dhibtoon,” Ms Almaz ayaa sidaasi BBC-da u dheegtay.
Seeygeeda oo lagu magacaabo Tadese Tulu ayaa sheegay in uu isaga iskuulka ka dhaadhiciyay in xaaskiisa ay imtixaanka u fariisato iyadoo Isbitaalka ku jirto.
Dalka Itoobiya waxaa caan ka ah in gabadhaha ay iskuulka ka tagaan marka ay uur yeeshaan, kadibna ay dib ugu soo laabtaan si ay waxbarashadooda u dhameystaan.
Ms Almaz ayaa haatan dooneyso in ay qaadato koorso laba sano ah, taasi oo u sahleeysa in ay ku biirto jaamacadda. Waxayna sheegtay in ay ku qanacday qaabka ay imtixaanka u gashay, canugeedana uu haatan wanaagsanyahay.